Oromia: Bilxiginnaan Maaster Pilaaniin saamichaa bifa haarawaan qabattee as baate:“Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa” jedha maqaansaa: Extensions of the garrison-town-economic-model of Ethiopia | OromianEconomist
Oromia: Bilxiginnaan Maaster Pilaaniin saamichaa bifa haarawaan qabattee as baate:“Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa” jedha maqaansaa: Extensions of the garrison-town-economic-model of Ethiopia	February 23, 2020
Tags: SAY NO, say no to master plan 2
Awash Post: Bilxiginnaan Maaster Pilaaniin saamichaa bifa haarawaan qabattee as baate. Karoorri haarofni Adaamaa Minjaarii (naannoo Amaaraa) fi godina Guraageen (Na Kibba) walqunnamsiisa. Zooniin diinagdee addaa uumamu kun bulchiinsa Oromiyaan ala ta’a. Oromiyaan qircamuuf! Hanga Oromiyaan diigamtutti jarreen raftee bulaarti hin fakkaatu.
Kan Dr Barii Ayano, professor of economics, barreesse dubbisaa!!!